UPDATE: JUBBALAND oo u hanjabtay mas’uuliyiinta maamulada degmooyinka ‘‘Ciddii DF Somaliya la shaqeysa tallaabo adag baan ka qaadeynaa‘‘! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: JUBBALAND oo u hanjabtay mas’uuliyiinta maamulada degmooyinka ‘‘Ciddii DF Somaliya la...
Kismaayo (Halqaran.com) – Maamulka Jubbaland ayaa xil ka qaadis ugu hanjabay Mas’uliyiinta Maamulada Degmooyinka, haddii ay la shaqeeyaan Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubaland oo laanta Af Soomaaliga ee BBC-da la hadlay ayaa beeniyay in ay jiraan ciidamo iyo mas’uuliyiin ka tirsan gobolka Gedo oo ka goostay maamulkooga.
Waxa uu sheegay n ciddii culeys lagu saaro in ay Jubaland ka tagto oo ay dowladda federaalka u shaqo tagto ay arrintaasi xor u tahay, waxa uuna intaasi ku daray in mas’uulki ka tirsan maamulkooga ee shaqada ka taga ay isla markiiba booskiisa buuxinayaan oo cid kale ay xilkaasi u dhiibayaan.
Dhanka kale, Madaxweyne Ku-xigeenka Jubbaland ayaa beeniyay in laga hor istaagay in uu Tago Degmooyinka Beled-Xaawo, Luuq iyo Doolow,balse uu ka baqay in rabasho ka dhacaan Degmooyinkaas.
Dowladda cidna lama shaqeyn karto
Jubbaland oo u hanjabtay